I-CASADITANO ECO-B & B UKUTHWALASWA KWESEKSI
Igumbi lakho lokulala sinombuki zindwendwe onguNicoletta
Igumbi lingaphakathi kwinqwelo yakudala, ebomvu, eyenziwe ngomthi yeTogni Circus! Kuye kwahlaziywa kusetyenziswa izinto zendalo kuphela kwaye kusekupheleni komthi we-chestnut enchanting. Yenziwe ngobuchule kwaye incasa inikwe izinto ze-eco-design kwaye ine-balcony encinci onokuthi uphumle kuyo kwaye wonwabele umbono wendalo engqongileyo. Akukho ngcoliseko lokukhanya kunye nengxolo, iingcongconi azikho kwaye ungalala kwindawo epholileyo nasehlotyeni!
Indlu ijikelezwe ngamaplanga emithi ye-chestnut yeenkulungwane apho kunokwenzeka ukuba uchithe iiyure ezimnandi zokuphumla kunye nokuzola ngombono omangalisayo phezu kwentlambo ye-Illasi.
Ikhareji yesekisi apho kwabelwe khona igumbi elinegumbi lokuhlambela labucala lixhotyiswe ngobugcisa kunye nencasa yobuqu kwaye iveranda engaphambili ivumela iindwendwe ukuba ziphumle kwisitulo esishukumayo ngelixa zijonge indalo engqongileyo.
Isithili sisembindini weentaba zeLessini, imizuzu embalwa ukusuka kumbindi weVelo Veronese, ukusuka kwiNtaba iCarega kunye nesiqingatha seyure ukusuka eVerona!
Sinovuyo olunyanisekileyo lokwamkela abantu ababelana ngendlela yethu yokuphila ngokusekwe kugcino lwendalo kunye nentlonipho yexesha kunye nokusingqongileyo.
Ngesicelo, iindwendwe zinokundwendwela indlu enkulu ebuyiselwe ngobuchule kunye nemigaqo yesakhiwo esiluhlaza kwaye ngamanye amaxesha batye ukutya kwi-greenhouse ecebisayo-ekhitshini nabanini.
Kuyenzeka ukuba bathathe inxaxheba kule khosi, nokuba kwinqanaba ngamnye, ukuba abanini ubambe kwizihloko ukusuka ukupheka zendalo, isonka gwele, itshizi, isepha, eco-kushicilelwa ngelaphu, igadi yemifuno ihambelana, Permaculture, isakhiwo eluhlaza njl
Kwanabancinci kunokwenzeka ukuba bacele imisebenzi yokudlala-yokuzonwabisa kwisayithi!